Xayiraada Mashruucii Qaran-kaab Oo Khilaaf Ka Dhex Abuurtay Wasiirrada Maaliyadda iyo Warfaafinta – somalilandtoday.com
Xayiraada Mashruucii Qaran-kaab Oo Khilaaf Ka Dhex Abuurtay Wasiirrada Maaliyadda iyo Warfaafinta
(SLT-Hargeysa)-Go’aankii Wasaaradda Warfaafintu ku xayirtay Mashruucii Indho sarcaadka ahaa ee Qaran-kaab, ayaa khilaaf hor leh ka dhex-huriyey Wasiirka Maaliyadda Yuusuf Maxamed Raage Iyo Kan Warfaafinta Cabdiraxmaan Guri-barwaaqo.
Waxanay xoguhuu intaa ku dareen in, Wasiirka oo xidhiidh dhow la leh, ashkhaasta Barnaamijka dabada ka wada, isla qaateen in aanay joojin qiimayntii ay sameeyeen, isla markaana qabtaan munaasibad weyn oo isaga lagu gudoonsiinayo Shahaadada kaalinta koowad ee uu isku arko inuu galay. Ilaha Wararka laga helay, ayaa tibaaxay in aanay joojinayn Barnaamijkan kooxda wadaa, kaddib dhiirigelinta uu siiyey Wasiirka Maaliyadu, kuwasoo aan dheg u jalaqsiin doonin amarka Wasaarada Warfaafinta.
Dhinaca kale, Xoggaha laga helay Madaxtooyadda, ayaa iyaguna sheegaya inuu Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi u arko tallaabada Wasiirka Maaliyada iyo kooxdiisa Qaran-kaab, mid fadeexadku ah, isla markaana Barnaamijkaasi yahay indho sarcaad hantida umadda lagu boobaayo. Waxa kaloo ay xoggaha arrimahan la xidhiidha sheegeen in Madaxweyne Muuse Biixi la mawqif yahay Wasaarada Warfaafinta.
Si kastaba ha ahaatee, Barnaamijka Qaran-kaab, waxa uu noqday mid aan starci ahayn, isla markaana uu markiisi horeba uu soo abaabulay Wasiirka Maaliyada Yuusuf Maxamed Cabdi Raage, maadaama oo ay qiimaynaha noocan ah ay qaban karaan oo keliya ururadda rayidka ah iyo Haayadaha Warbaahinta oo is kaashada. Barnaamijka ayaa qaybaha bulshadu ku tilmaamntay mid faashil ah, oo fadeexadku ah Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi.